Banyere Anyị - Hebei Ideal Arts Factory
Hebei Ezigbo Arts Factory. bụ a pụrụ iche na emeputa na ozu ahia nke marble ọla na igba ígwè ihe na ihe 30 afọ ahụmahụ. Companylọ ọrụ anyị dị na obodo Shijiazhuang, mpaghara Hebei nke China.
Isi ahia anyị bụ ụdị okwute na ọla kọpa dị iche iche gụnyere ọnụ ọgụgụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, anụmanụ, ihe akpụrụ akpụ, akpụrụ akpụ, ite ifuru, ogidi, isi iyi, gazeboes, ekwú ọkụ na obere ihe onyinye. ihe nkedo ihe eji eme ihe bu gherebo, ngere .gate na oriọna. Obi dị anyị ụtọ iwere iwu dịka ihe atụ ma ọ bụ esere n'aka gị.
Anyị na-ekwusi ike mgbe niile na ụkpụrụ nke abamuru abụọ na ịzụlite ọnụ. Ngwaahịa anyị niile na-ere nke ọma n'ụwa niile, gụnyere Europe, America, Asia, Australia na South Africa, karịa mba 30 na mpaghara.
Anyị ji obi anyị na-achọ na-arụkọ ọrụ na ụlọ na mba ọzọ ndị ahịa na ndabere nke ibe uru. Ọ ga-amasị anyị ịnye gị ngwaahịa na-enye afọ ojuju yana ọrụ anyị dị elu.
Hebei Ideal Arts ụlọ ọrụ dị na Quyang County, Hebei Province, nke a maara dị ka "obodo nke China ọkpụkpụ"
E hiwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na 1985. Ruo ugbu a, anyị nwere afọ 35 nke mmepụta na ahụmịhe ahịa.
Site na nzukọ ezinụlọ nke mbụ na ụlọ nrụpụta ọgbara ọhụrụ. Anyị nwere ekele dị ukwuu nye ndị ọhụụ ọhụrụ na ndị ochie maka nkwado na enyemaka ha.
Anyị factory ugbu a nwere nnọọ zuru okè mmepụta na ahịa usoro.
Ngalaba imepụta, ngalaba na-eme ihe nlereanya. Ngalaba nhọrọ ihe onwunwe. Ngalaba mmepụta. Ngalaba na-egbu egbu. Ngalaba nnabata. Ngalaba nkwakọ ngwaahịa ikpeazụ.
Ngalaba ọ bụla nwere onye otu ndị ọrụ nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe ọrụ. All mmepụta Filiks na-nditịm chọrọ. Naanị n'ụzọ a ka anyị nwere ike hụ na ndị ahịa ga-enweta ngwaahịa dị elu.
N'afọ adịbeghị anya. Iji gbasaa azụmahịa ya. Ugbu a, anyị eguzobewo ogologo oge ma kwụsie ike na ndị ahịa si France, United States, Italy, Russia, Switzerland, Qatar, Saudi Arabia, South Korea na mba ndị ọzọ. Na ndị ahịa njedebe na mba ụfọdụ na-azụta n'ụlọ ọrụ anyị ma webata ndị enyi, ezinụlọ, ndị agbata obi anyị.
Anyị enwetawo ugwu dị elu maka ịhọrọ ihe onwunwe na ịrụ ọrụ magburu onwe ya.
"Ogo bụ ọdịbendị anyị" Ọrụ ọ bụla nke nka nwere akụkọ nke ya. Ngwaahịa ọ bụla anyị mepụtara na-enyocha ma gbanwee ọtụtụ oge. Oge ọ bụla anyị nwetara azịza na-eju afọ site na ndị ahịa anyị. Anyị nwere obi ụtọ dị ka ndị ọbịa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ngwaahịa anyị. Egbula kpọtụrụ anyị. Anyị na-arụ ọrụ gị mgbe niile. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ "ime ka ụwa ịhụnanya mere na China"
Adreesị: Rm No.15a10-15a11, Zhongyuan Building, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei, China